Ngwongwo nke nkume na-egbu nri maka nnu na Tanzania - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>igwe igwe>> Ngwongwo nkume na-egbu nri maka nnu na Tanzania
edemede si: igwe igwe | oge: December 20, 2017 | Tag:igwe igwe	|
nke a na-eme ka a na-ere nri na Tanzania, Shanghai XSM bụ ngwá ọrụ crusher, ọkachamara na-emepụta ihe na-emepụta ihe na Tanzania, ngwá ọrụ ndị na-emepụta ngwá ọrụ, ndị na-emepụta ihe igwe. belt ebu, onye na-enye nri ọkụ, ihe eji ebu oku ezigara ya nkuku uhie, nkpọchi mmetụta, nnyeghari hydraulic bụ ihe na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke abụọ nke a obere jawcrusher, ihe na-esi ísì nyochaa nke atọ nke atọ na-ekpuchi jijiji na ihuenyo gbakwunyere nkọwa zuru oke nke ore ahụ na-eburu ya igwe mgbidi, igwe na-edozi Ngwọta nlekọta ọgwụ dị mma ndị na-arụ ọrụ magnet, igwe onu mmiri họrọ ọtụtụ ụdị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a, ọ bụ naanị ọrụ nhazi ọ bụla, Shanghai XSM dabere n'ụdị ụdị gị bụ ngwá ọrụ m kachasị mma, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ pịa aka nri akụkụ nke akara ngosi akara, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ịchọrọ gị azịza zuru ezu.
Ngwongwo nkume na-agbazi ihe niile, a na-ejikarị ya eme ihe na metallurgy, mining, chemical, simenti, nkume akọrọ na-ere ọkụ, ihe owuwu, ihe ndị na-eme ka ájá, ihe ndị na-egbuke egbuke na ihe ndị ọzọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ nsị. Ọ bụ nke kachasị mma maka ịkụcha ụdị ihe ọ bụla dị nro nke siri ike ma dị nro nke ume ike ya dị elu karịa 320MPa (MPa). Ngwongwo nkume nwere ike ime ka 0-3mm 0-5mm 0-8mm mee ka uzuzu dị mma!
igwe nkume na-arụ ọrụ na-agba agba
① akwa mmepụta ikike, oke ruru;
② obere ike oriri, nhazi nke ngwaahịa;
③ nhazi ígwè nwere mfe, kọmpat ma dị arọ;
④ obere ụgwọ ego, nchịkwa dị mfe na ihe ndị ọzọ.
igwe nkume na-arụ ọrụ
Ịgbagharị nke ọma site na chassis, rotor, counterattack na grate bars na mmiri ndị ọzọ. A na-ekewapu elu na nke ala ala na akụkụ abụọ, nke a kwadoro site na ịcha akwa efere, akụkụ ndị fọdụrụ na-ejikọta ọnụ. N'ime ime ihe a na-eji akwa nchara ígwè, nke dị mfe iji dochie anya mgbe ọ na-eyi. A na-eji ihe dị iche iche na-ebu ihe a na-eji edozi ihe a na-eji edozi ahụ, nke a na-ejikọta ya.
Gbanyụọ akwụkwọ nchịkọta ọrụ
Onye na-elekọta ya na-esi na V-belt nke ụgbọ ahụ na-ebugharị, nke mere na rotor na-agagharị. Mgbe nnukwu ihe onwunwe banye n'ime ime ụlọ na-arụ ọrụ, ọnyá na-agagharị na-agbagharị ya. Ihe ndi ruru eru site na ala nke ihe obosara nke ndi ozo, ndi na-erughi n'ulo, ndi rotor na ndi hama na-agbaji ruo mgbe enwere ike wepu ya. Iji zere clogging, ọdịnaya mmiri nke ihe onwunwe a na-ejikarị ejikarị karịa 20%.
← SAND NA-EKWU MACHINERY ECHICHE